मेरो Geofumadas - पृष्ठ3- Geofumadas
Geofumed को नाम मा गलत इमेल को चेतावनी
आज, सेप्टेम्बर २ As सम्म हामीले पाठकहरूबाट रिपोर्टहरू पायौं कि फेसबुक वा सिधा मेल मार्फत जियोफुमाडस साइटबाट लेख्ने कसैको तर्फबाट सन्देशहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसैले म चेतावनीको घोषणा गर्न ठाउँको फाइदा लिन्छु। यो अफ्रिकी घोटालाको क्लासिक सन्देश हो जुन निम्न सन्देश पठाउँदछ: हेलो ...
हामीले छाला बदल्न पर्छ
यदि तपाईले केहि चीजहरू देखाउनुभयो "बर्बाद" धेरै राम्रो अघिल्लो टेम्प्लेट, तर होस्टगेट्ट टिकट धेरै थोरै छ ... हामी नयाँ डिजाइनमा अनुकूलन गर्दा केही धैर्य अनुरोध गर्दछौं।
१ बर्ष अघि मैले सर्वेक्षण मोडमा प्रोमार्क tested लाई परिक्षण गरें र जिओफुमाडासलाई सामाजिक नेटवर्कमा एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरें। २ बर्ष पहिले होन्डुरसमा भय coup्कर कुटपत्ता, सबैले आ-आफ्नो घरमा ताला लगाए, सडकमा सायरन, दंगा र राष्ट्रपति कोस्टा रिकामा टुक्रिएको लगभग पागलसँगै ...
इन्टरनेट र ब्लगहरू, मेरो egeomates, आराम / प्रेरणा
ग्लोबल इन्टर्नेट प्रयोगकर्ता सांख्यिकी
भर्खरै, अक्सिटो एक्सपोर्टोरले विश्व २०११ मा इन्टरनेटको प्रवेश र प्रयोगको बारेमा २०११ को लागि विश्व तथ्या .्क अपडेट गर्‍यो। हुनसक्छ एक उत्तम स्रोत मध्ये एक प्रकारको जानकारी परामर्श गर्न महाद्वीप को स्तर मा, मात्र देश र भाषा को पनि। मैले केहि डाटा देखाउनको लागि यो पोष्ट लिन्छु, र संयोगले ...
राम्रो पाउनुहोस्, इन्टरनेट र ब्लगहरू, मेरो egeomates
EGeomate को आधिकारिक सुरूवात!
ठूलो सन्तुष्टिको साथ, जिओफुमाडासले आधिकारिक रूपमा NON-HISPANIC- बोल्ने सार्वजनिकको लागि eGeomate को बीटा संस्करण सुरू गर्दछ। संक्षेप मा, यो Geofumadas को अंग्रेजी मा अनुवाद एक संस्करण हो, प्लस यसको आफ्नै सामग्री जुन एकै साथ थपिने छैन। CMS टेम्पलेट समान छ, यसले नाम परिवर्तन गर्दछ जुन केही सर्तमा आधारित छ ...
राम्रो पाउनुहोस् मेरो egeomates
राम्रो पाउनुहोस्, नवाचारै, मेरो egeomates
जिओफुमाडास नयाँ डोमेनमा सर्दा चार महिना भएको छ, अन्तमा गुगल एल्गोरिदम र सामाजिक नेटवर्कको प्रयोग पछि म १,1,300०० आगन्तुकहरू प्रति दिन भन्दा बढीमा सफल हुन सकेको छु, जुन मैले पानीको रूपमा आशा गरेको थिए किनकि यो कार्टेसियन्सको औसत थियो। म यो पोस्ट स्पेनिश भाषा को क्षेत्र को कुछ तथ्या get्कहरु लिन को लागी लिन्छ ...
अन्वेषण चहचहाना: प्रेरित हुनुहोस्
यदि मेरो चचेरो भाईले ट्विटर प्रयोग गरेको भए, मेरो काकीको भोकल कर्ड (QDDG) राम्रो जीवन हुने थियो। धेरै नयाँ चीजको विज्ञापनमा परिवर्तन भएका छन्। जीवन years 35 वर्ष पहिले सरल थियो, कक्षाको दोस्रो दिन पछि - किनभने त्यहाँ तिनीहरू मध्ये दुई थिए - केहि महत्व छैन, होमवर्क छैन, परीक्षा छैन, हैन ...
के यो ब्लग हुनुको लायक छ?
- हो, यस्तो कच्चा कथन एक प्रस context्ग र कुनै ब्लगको साथ हामीले बुझाइरहेका छौं वा हामीले के मोल गर्छौं त्यसको पर्याप्त विवरण बाहेक धेरै उत्तरदायी देखिदैन। धेरै अवसरहरूमा मैले टिप्पणी गरे कि Geofumadas लेखन को लागी एक जुनून को तृप्ति र फिर्ता को विचार संग जन्म भएको थियो ...
ब्लग मेरो egeomates
मेरी छोरीको पहिलो तेल
अब म फर्कें। तीन वर्ष जियोफ्यूमिing पछि, मैले ब्रेक लिने निर्णय गरें जुन मलाई पहिले नै चाहिएको थियो। मैले कामको लागि नभई शान्त विश्व कप हेर्नको लागि केही समयहरू खोजेको थिएँ, र आरामको केही अनुभवजन्य कला पनि गर्ने गर्थे। म चित्रमा फर्कें, तर यस पटक तेलमा छैन, ...
यात्रा, sabbatical। क्यालिफोर्नियाको गभर्नरले भने। म फेरी आउछु।
तपाईंको अन्तिम चुम्बनको .37.5 XNUMX.। सेकेन्ड
तपाईंलाई नाईँ भन्नु भनेको सुन्नु भन्दा तपाई सजिलो हुन्थ्यो। यो हृदयमा कडा चोट पुग्छ, कि मैले यो आशा गरेको छैन, अहिल्यै होइन, शायद कहिले पनि होईन। यसैले मैले तपाईंलाई एउटा अन्तिम चुम्बनको लागि भनेको हुँ। धेरै लामो छैन, धेरै छोटो पनि छैन। केवल मेरो ड्राई ओठहरूको सम्पर्कबाट .37.5 XNUMX..XNUMX सेकेन्ड ...